Vaovao - Fampiasana vovo-kalsioma
1. vovo-kalsioma ho an'ny indostria fingotra
Vovo-kalsioma ho an'ny fingotra-fingotra: (400 harato, fotsifotsy: 93%, atin'ny kalsioma: 96%). Ny vovo-kalsioma dia iray amin'ireo mpameno lehibe indrindra ampiasaina amin'ny indostria fingotra. Vovoka calcium be dia be no fenoina fingotra, izay afaka mampiakatra ny habetsaky ny vokatra ao aminy ary mamonjy fingotra voajanahary lafo vidy, amin'izay mampihena be ny vidiny. Ny vovo-kalsioma dia nofenoina fingotra hahazoana tanjaka matanjaka kokoa, tanjaka mandatsa-dranomaso ary fanoherana noho ny volo vita amin'ny vovoka madio.
2. Sanda vovo-kalsioma ho an'ny indostria plastika
Ny masterbatch plastika sy ny masterbatch amin'ny loko dia mampiasa vovo-kalsioma 400 harato. Ny fotsifotsy dia takiana amin'ny fiovana tsy miova aorian'ny fiakaran'ny hafanana avo. Ny firafitry ny ozona dia votoatin'ny vovo-kalitao vita amin'ny kalsioma: 99%, fotsifotsy: 95%), vovoka calcium dia azo ampiasaina amin'ny vokatra plastika Ho an'ny karazana taolana, dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fitoniana vokatra plastika, ary afaka mampitombo ihany koa ny hamafin'ireo vokatra, ary manatsara ny famirapiratan'ny vokatra sy ny fahamendrehan'ny vokatra. Satria ny fotsifotsy karbonatan'ny kalsioma dia mihoatra ny 90, dia afaka manolo loko fotsy lafo vidy koa izy io.
3. vovo-kalsioma ho an'ny indostrian'ny loko
Vovon-kalsioma 800 harato na harato 1000 ho an'ny lokon'ny lokony sy ny latsa, fotsifotsy: 95%, calcium carbonate: 96%, ny haben'ny vovo-kalsioma amin'ny indostrian'ny loko dia lehibe koa, ohatra, ny haben'ny 30% amin'ny loko matevina .
4. Vovon-kalsioma ho an'ny indostrian'ny famonoana rano
Vovon-kalsioma 800 mesh na 1000 mesh ho an'ny loko miorina amin'ny rano, fotsifotsy: 95%, vovo-kalsioma: 96%, vovo-kalsioma no be mpampiasa kokoa amin'ny indostrian'ny loko miorina amin'ny rano, afaka mahatonga ny loko tsy hipetraka, mora hiparitaka, gloss tsara sy toetra hafa, amin'ny Ny habetsaky ny loko miorina amin'ny rano dia 20-60%.
5. vovo-kalsioma ho an'ny indostrian'ny taratasy
325 vovoka kalsioma mavesatra ho an'ny fanaovana papermaking, fitakiana fotsifotsy: 95%, votoatin'ny vovo-kalsioma: 98%, vovo-tsiranoka calcium dia mitana andraikitra lehibe amin'ny indostrian'ny fanaovana papermaking, afaka miantoka ny tanjaka sy ny fahadiovan'ny taratasy, ary ambany ny vidiny.
6. vovo-kalsioma ho an'ny indostrian'ny fananganana (rihitra maina, beton)
Vovon-kalsioma 325 harato ho an'ny rihitra maina, filàna fotsifotsy: 95%, votoatin'ny vovo-kalsioma: 98%, vovo-kalsioma dia mitana andraikitra lehibe amin'ny beton amin'ny indostrian'ny fananganana. Tsy ny vidin'ny famokarana ihany no azo ahena, fa ny hamafin'ny vokatra sy ny tanjaky ny vokatra azo ampitomboina ihany koa.
7. vovo-kalsioma ho an'ny indostrian'ny valindrihana tsy misy afo
Vovon-kalsioma 600 meshes ho an'ny valindrihana mirehitra, takiana amin'ny fotsifotsy: 95%, votoatin'ny vovo-kalsioma: 98,5%, vovo-kalsioma dia mila ampiasaina amin'ny fizotran'ny valindrihana mirehitra, izay afaka manatsara ny fotsifotsy sy ny famirapiratan'ny vokatra ary ny fahombiazan'ny fireproof hitombo ihany koa.
8. vovo-kalsioma ho an'ny indostria marbra artifisialy
Vovon-kalsioma ho an'ny marbra artifisialy 325 harato, filàna fotsifotsy: 95%, votoatin'ny vovo-kalsioma: 98,5%, madio sy tsy misy loto, kalsioma karbonika no be mpampiasa tamin'ny famokarana marbra artifisialy.
9. vovo-kalsioma ho an'ny indostrian'ny taila
Vovon-kalsioma 400 harato ho an'ny gorodon'ny gorodona, fitakiana fotsifotsy: 95%, votoatin'ny vovo-kalsioma: 98,5%, madio ary tsy misy loto. Ny vovo-kalsioma dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny fametahana gorodona mba hampitomboana ny fotsifotsy sy ny tanjaka amn'ny vokatra, hanatsara ny hamafin'ny vokatra ary hampihena ny vidin'ny famokarana.
Fotoana fandefasana: Aug-22-2020